HomeWararka MaantaMustaqbalkayga Wali Go’aan Kamaan Gaadhin – Benitez
Rafael Benitez ayaa sheegay inaanu wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa tababarenimo ee kooxda Napoli, waxaanu hoosta ka xariiqay in arintaas uu go’aan kama dambeys ah ka gaadhi doono marka la gaadho dhamaadka xili ciyaareedkan.
Khabiirkan 54 jirka ah ayaa jagada kala wareegay tababarihii ka horeeyey ee Walter Mazzarri’ sanadkii 2013 kii, waxaanu guulo badan u horseeday Napoli tan iyo xiligaasi isagoo kooxda ku hogaamiyey inay ku guuleysato Coppa Italia bishii May.
Napoli ayaa la saadaalinayay inay wacdaro ka dhigi doonto sanadkan laakiin malahaasi wuu beenoobay waxaanay imika fadhidaa 15 dhibcood hoostood kooxda hogaanka gacanta ku haysa ee Juventus.
Isagoo saxaafada la hadlayay Arbacadii, Benitez wax badan kama sheegin kutidhi kuteenta sheegaysa inuu dhamaadka xili ciyaareedkan isaga huleeli doono Napoli : “Bishii January ayaan sheegay inaan ka hadli doono [mustaqbalkayga] markay gaadho bisha April.
“Waraysiganina wuxuu dib ugu noqonayaa uun kii January. Mustaqbalkayga wali go’aan kamaan gaadhin.
“Imika ayaan kuu sheegayaa, Wax dalab ah oo kooxo kale iga soo gaadhay ma jiraan, Aniguna koox aan si gaar ah xiise ugu qabaa ma jirto oo aan ahayn ka fikirka ciyaarta Berri (Maanta).”
Tababare Wenger Oo Aflagaadeeyey NEBI CIISE (Calayhi Salaam)
Michael Bisping vs Kelvin Gastelum K.O Full Fight 25th November 2017 : UFC 122 Bisping vs Gastelum
Xiddigihii Hore Ee Liverpool Oo Karbaashay Halyeeyadii Real Madrid
25/03/2017 Abdiwahab Ahmed